တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ – ၂၉
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Ms. Andrea Faulkner အား ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံ စဈသံမှူး Colonel Paul Bruce နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံတို့သညျ ရှေးယခငျကပငျ ကောငျးမှနျသညျ့ ဆကျဆံ ရေးရှိခဲ့ပွီး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမိုတိုးမွငျ့လာသညျ့အခွအေနေ မြား၊ သွစတွေးလနြိုငျငံတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တောမီးလောငျမှု သဘာဝဘေးအန်တရာယျနှငျ့ ပတျသကျပွီး အမွနျဆုံးမူလအတိုငျး ပွနျလညျဖွဈ စလေိုပွီး တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျမြားနှငျ့ မီးငွှိမျးသတျရာတှငျ ပါဝငျကွသူမြား၏ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှုမြားကို အကောငျးဆုံး ဖွရှေငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနှငျ့ သငျတနျးသားမြားစလှေတျမှုမြားတှငျ ပိုမိုတိုးမွငျ့ဆောငျရှကျ နိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ အငျဒို-ပစိဖိတျဒသေဆိုငျရာ ပထဝီနိုငျငံရေးအခွအေနမြေား၊ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈ ဆေးရေးကျောမရှငျ (ICOE) အစီရငျခံစာမထှကျပျေါမီကပငျ လိုအပျသောစုံစမျးစဈဆေးမှုမြားနှငျ့ စဈတရားရုံးဖှဲ့ စညျးဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေား၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာတရားရုံး (ICJ) ကွားဖွတျစီမံဆောငျရှကျခကျြမြား ခမြှတျခဲ့မှု အပျေါ တပျမတျောမှ ဥပဒအေတိုငျးသာ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါးထုတျလုပျမှုမြား ဆကျစပျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ သွစတွေးလနြိုငျငံက ကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျ မညျ့ အခွအေနမြေားအား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံ သံအမတျကွီး တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ ကွသညျ။
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ – ၂၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Ms. Andrea Faulkner အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ စစ်သံမှူး Colonel Paul Bruce နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့သည် ရှေးယခင်ကပင် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံ ရေးရှိခဲ့ပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးမြင့်လာသည့်အခြေအနေ များ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တောမီးလောင်မှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြန်ဆုံးမူလအတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ် စေလိုပြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ရာတွင် ပါဝင်ကြသူများ၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် သင်တန်းသားများစေလွှတ်မှုများတွင် ပိုမိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးကော်မရှင် (ICOE) အစီရင်ခံစာမထွက်ပေါ်မီကပင် လိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် စစ်တရားရုံးဖွဲ့ စည်းဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် အခြေအနေများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့မှု အပေါ် တပ်မတော်မှ ဥပဒေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုများ ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင် မည့် အခြေအနေများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် (၈)ကြိမ်မြောက် မော်စကို နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(8th Moscow Conference on International Security) သို့ တက်ရောက်၍ “အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း စစ်ဘက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အလားအလာများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေး
တပ်မတော်သားတိုင်းတစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးအတွက် ကျန်းမာ၊ ကြံ့ခိုင်၊ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိအောင်လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်ရေးနှင့် အမိန့်နာခံမှုရှိစေရေး အဓိကထားလေ့ကျင့် ရမည်ဖြစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၀ Admin 0